people Nepal » पीपीएल : विराटनगरको पहिलो जित , बुटवल ब्लास्टर्सको पहिलो हार ! पीपीएल : विराटनगरको पहिलो जित , बुटवल ब्लास्टर्सको पहिलो हार ! – people Nepal
पीपीएल : विराटनगरको पहिलो जित , बुटवल ब्लास्टर्सको पहिलो हार !
पोखरा पि्रमियर लिग (पीपीएल) क्रिकेट प्रतियोगितामा विराटनगर टाइटन्सले पहिलो जित हात पारेको छ ।
प्रतियोगितामा यसअघिका तीन खेलमा पराजित भएको विराटनगरले बुटवल ब्लास्टर्सलाई १२ रनले पराजित गरेको हो ।
बलिङतर्फ कप्तान सन्दीप लामिछाने र किशोर महतोले समान २-२ विकेट लिए ।
टस जितेर ब्याटिङ गरेको विराटनगरले निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेटको क्षतिमा १४० रन बनाएको थियो । विराटनगरका लागि मोहम्मद जाइद आलमले उत्कृष्ट ब्याटिङ गरे । उनले ४५ बलमा ७२ रन बनाए । उनले ५ छक्का र ६ चौका प्रहार गरे । त्यस्तै, प्रदीप ऐरीले ४१ रन बनाए । आलम र ऐरीको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा विराटनगरले सम्मानजनक स्कोर बनाएको थियो ।
बलिङतर्फ भने बुटवलका ललित भण्डारीले २ विकेट लिए । त्यस्तै, सामसद शेख, विपिन खत्री र सागर पुनले समान १-१ विकेट लिए । लगातार ३ खेलमा हार ब्यहोर्दै २ खेल खेल्नुअघि नै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको विराटनगरले आफ्नो चौथो खेलमा जित हात पारेको हो ।
यता, बुटवलको भने यो पहिलो हार हो । यसअघि बुटवलले दुबै खेलमा जित हात पारेको थियो ।